भेरीगंगामा प्रादेशिक विमानस्थल बनाइने
२०७९ असार १४ मंगलबार / Tuesday, June 28, 2022
२०७९ जेठ १० मंगलबार
काठमाडौं । सरकारले सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल बनाउने जानकारी दिएकी हुन् ।
विभिन्न मुलुकमा नेपाली हवाई सेवा कम्पनीले सेवा प्रवाह गर्नका लागि सरकारले सम्झौता गर्ने पनि उनले बताएकी छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि निर्माण सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा तयार गरिने पनि भण्डारीले बताइन् ।
आगामी वर्ष चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, नेपालगन्ज र धनगढीमा रहेको विमानस्थलमा सुविधाजनक टनेल निर्माण गर्ने, हवाई सेवालाई विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने, हवाई क्षेत्रका सम्पूर्ण नियमहरु परिपालना गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपालका हवाई कम्पनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
बुटवलको नीति तथा कार्यक्रम : समानता र स्वाभिमान उपमहानगर निर्माण गर्ने लक्ष्य
लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायत जनताका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्दै रोजगारीको सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उपमहागरपालिकाले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०
धनगढी उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम- पूर्वाधार विकासका लागि ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मंगलबार धनगढी उप महानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले
बालेनको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम- सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले आफ्नो कार्यकालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार सार्बजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चुनावअघि गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई स्थान दिएका छन्
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित
पोखरा । गण्डकी सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भएको छ । सोमबारको संसद बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पास भएको हाे । २४ जेठमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले
न्युजिल्यान्डबिरुद्द इङ्ल्यान्डको क्लिनस्विप
अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सकड दुईतर्फी सञ्चालन
युक्रेनको क्रेमेन्चुकस्थित सपिङ मलमा रुसको मिसाइल आक्रमण, १६ जनाको मृत्यु
लन्डनबाट एक महिनादेखि नेपाली युवा रिदम बेपत्ता
श्रीलंकामा तेल सकियो, अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्रलाई वितरणमा रोक
झापा क्षेत्रमा भारी वर्षा, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अपिल
बिहीबारसम्म वर्षाको सम्भावना, आज कुन ठाउको मौसम कस्तो छ ?
लामो लकडाउनले चीनमा मानसिक रोगी बढे !
कस्तो छ ७१ लाख पर्ने तकिया ?
चुरोटको लत छोड्न किन गाह्रो हुन्छ ?